नेपालमा वितरण गरिएका कोभिसिल्ड, भेरोसेल र जोनसनको खोपमा कुन बढी उपयुक्त होला भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । यसको उत्तर कुनै एक भ्याक्सिनको पक्षमा देखिँदैन । जोनसन एन्ड जोनसनको एक डोजवाला खोपबारे थुप्रै अड्कल र अन...
लगभग ५५ वर्षयता निरन्तर ओलम्पिकमा भाग लिइरहेको नेपालले प्रत्येक वर्ष खेलाडी पठाउँछ । खेलाडीसँगै जोडिएर सम्बन्धित खेलका प्रशिक्षक, व्यवस्थापकका नाममा खेलाडीको संख्याभन्दा दोब्बरको संख्यामा नेपालका खेल पदाधिकारीहरु ...
एसियन महिला भलिबल च्याम्पियनसिप खेल्न नपाएको नेपालको अबको तयारी के ?
नेपाली भलिबल टोलीको पहिलो पटक एसियन कप खेल्ने सपना टुटेको छ । प्रतियोगिताका लागि नेपालले असार १ गतेबाट २७ जना खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा राखेको थियो । कोभिडको नयाँ भेरियन्ट देखिएको भन्दै नेपाल र भारतलाई य...
राजनीतिक दलको मनलाग्दी, कोरोनाको डरले व्यवसायीलाई बन्देज कहिलेसम्म ?
कलंकीमा होटल व्यवसाय गर्दै आएकी लक्ष्मी पौडेल दिनभर होटल खोल्न पाउँदिनन् । दिनभर होटल सुनसान हुन्छ । जब बेलुका ग्राहकको भीड हुन्छ, त्यही बेला प्रहरी सिठी बजाउँदै पसल बन्द गर्न भन्दै आइहाल्छ । दिनभर ग्राहक...